२०७४ मा भरतपुरबाहेक धेरै पालिकामा थियो कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन, कस्तो आएको थियो नतिजा? :: सन्जिब बगाले :: Setopati
२०७४ मा भरतपुरबाहेक धेरै पालिकामा थियो कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन, कस्तो आएको थियो नतिजा?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेलको विषय आउनसाथ धेरैको ध्यान चितवनको भरतपुर महानगरमा पुग्छ।
जहाँ २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी रेनु दाहाल मेयर निर्वाचित भएकी थिइन्।
२०७४ को चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले भरतपुरबाहेक धेरै पालिकामा तालमेल गरेका थिए। तालमेल भएकामध्ये कतिपय ठाउँमा दुबै दलका उम्मेदवारले जितेका थिए भने कतिपय ठाउँमा दुबै दल पराजित भएका थिए। कतिपय पालिकामा एउटा दलले जित्ने अनि अर्कोले हार्ने भएको थियो।
गठबन्धन भएका जिल्लाका पालिकाहरूमा आएको मतलाई आधार मान्ने हो कांग्रेस र माओवादी दुबैले आफू कमजोर भएको ठाउँमा तालमेल गरेका छन्।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल भएका केही जिल्लालाई हामीले आधार बनाएका छौं। जसमा कांग्रेस र माओवादीले मिश्रित सफलता पाएका छन्।
दोलखाका ९ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस र माओवादीले ७ पालिकामा तालमेल गरेका थिए। सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा तालमेल भएको जिल्ला समभवत: दोलखा नै हो।
दोलखामा एमाले एक्लै बलियो भएकाले कांग्रेस र माओवादी दुबैले सोहीअनुसार तालमेल गरेको मत परिणामले देखाउँछ।
७ स्थानीय तहमा तालमेल भए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वैतेश्वर र विगु गाँउपालिकामा विजय हासिल गरेका थिए। दुवै गाउँपालिकामा कांग्रेसका अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष विजयी भएका थिए। तालमेल गरेर पनि माओवादीले प्रमुख र कांग्रेसले उपप्रमुख लिएका ठाउँमा भने गठबन्धन पराजित भएको थियो।
कालिञ्चोक, गौरीशंकर, तामकोशी, मैलुङ गाँउपालिका र भीमेश्वर नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीले एमाले एक्लैसँग हारेका थिए।
जिरी नगरपालिका र शैलुङ गाँउपालिकामा भने कांग्रेस र माओवादी अलग-अलग लडेका थिए। ती दुई पालिकामा कांग्रेस र माओवादीले पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने दुबैमा एमाले अलि कमजोर भएकाले उनीहरूले तालमेल नगरेका हुन्।
जिरीमा एमालेले ३ हजार २ सय १२ मत पाएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले २ हजार १ सय ६ र कांग्रेसले १ हजार ४ सय २ मत पाएको थियो।
सैलुङ गाउँपालिकामा एमालेले ४ हजार १ सय ५६ मत ल्याउँदा कांग्रेसले २ हजार ५ सय ५७ र माओवादी केन्द्रले २ हजार १ सय २५ मत पाएको थियो।
धादिङका १३ मध्ये ५ स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएको थियो।
जसमध्ये निलकण्ठ नगरपालिकामा कांग्रेसका भीमप्रसाद ढुंगाना मेयर बनेका थिए भने माओवादी केन्द्रका मनराज भण्डारी उपमेयर बनेका थिए।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका पित्तबहादुर डल्लाकोटी अध्यक्ष बनेका थिए भने कांग्रेसका देवीप्रसाद सिलवाल उपाध्यक्ष बनेका थिए। कांग्रेस र माओवादीको तालमेल भए पनि गजुरी,ज्वालामुखी र थाक्रे गाउँपालिकामा गठबन्धन पराजित भएको थियो। १३ स्थानीय तहमध्ये ८ ठाउँमा एमाले विजयी भएको थियो भने कांग्रेस ३ ठाउँमा विजयी भएको थियो राप्रपा र माओवादी १/१ स्थानीय तहमा विजयी भएका थिए।
मकवानपुरका १० मध्ये ३ स्थानीय तहमा तालमेल भएको थियो। तालमेल भएकामध्ये थाहा नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्र र उपमेयरमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। हेटौडा उपमहानगरपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकामा भने गठबन्धन पराजित भएको थियो। १० मध्ये ६ ठाउँमा विजयी बनेको एमालेले २ ठाउँमा गठबन्धनलाई हरायो भने इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा गठबन्धनका उमेदवारहरूले भन्दा धेरै मत पाएको थियो। यो गाउपालिकामा एमालेले ३ हजार २ सय ४ ,कांग्रेसले २ हजार २ सय ७३ र माओवादी केन्द्रले ४ सय ९२ मत पाएको थियो। ३ वटा स्थानीय तहमा भने कांग्रेस र माओवादीले ल्याएको मत एमालेले ल्याएको भन्दा धेरै छ। मकवानपुरमा कांग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले २ स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेका थिए।
दोलखा, धादिङ र मकवानपुरमात्रै होइन ताप्लेजुङमा समेत कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको थियो।
ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहमध्ये ४ मा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भएको थियो। जसमध्ये फुङलिङ नगरपालिकामा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार पराजित भएका थिए भने माओवादी केन्द्रका उपमेयर उम्मेदवार विजयी बनेका थिए। त्यस्तै मेरिङदेन गाउँपालिकामा कांग्रेसका अध्यक्ष उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने माओवादीको उपाध्यक्षका उम्मेदवार पराजित भएका थिए।
सिदिङवा गाउपालिकामा भने अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष माओवादीले जितेको थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भए पनि एमाले एक्लैले ५ स्थानीय तहमा जितेको थियो।
कांग्रेस एक्लैले २ स्थानमा जितेको थियो भने माओवादीको सहयोगमा २ ठाउँमा जितेको थियो। दुई दलले तालमेल गरेको आधार हेर्ने हो भने आफू कमजोर भएका जिल्लामात्रै छैन। कतिपय पालिकामा मात्रै पनि तालमेल भएको छ। जसको उदाहरण धनुषा हो।
धनुषामा १८ स्थानीय तहमध्ये एमालेले ४ ठाउँमा विजय हासिल गरेको थियो। जबकी कांग्रेसले ८ ठाउँमा जितेको थियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले २ स्थानीय तह जितेको थियो। यस्तो जिल्लामा समेत मिथिला नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको थियो।
त्यहाँ कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएका थिए। तर दुबै दललाई एमाले एक्लैले हरायो। एमालेका हरिनारायण महतो ६ हजार ७ सय ४० मत ल्याएर विजयी भए भने कांग्रेसका राजकमुमार महतोले ५ हजार १ सय ७८ मत पाएका थिए।
उपप्रमुखमा पनि एमालेकै ताराकुमारी बस्नेत विजयी भइन्। उनले ६ हजार ६ सय ६५ मत ल्याउँदा माओवादीका मीनबहादुर जर्गा मगरले ६ हजार ३ सय ३८ मत पाएका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ५, २०७९, ०६:५८:००